काठमाडाैंमा ह्वात्तै बढ्यो कुखुराको मासुको भाउ, अब केजीलाई कति ? – Sanchar Patrika
July 5, 2020 257
काठमाडाैं ।अहिले मुलुक लकडाउनमा छ । किन ? किनभने मान्छेको भि’डभा’ड र आपसी घुलमिल नहोस् भनेर । को’रोना भा’इरसको औषधि एवं खोप आइसकेको छैन । यही कारण को’रोना भा’इरसजस्तो सं’क्रामक रो’गबाट जोगिन लकडाउनलाई अहिले एउटा विकल्पको रुपमा अपनाइएको हो । तर सडकमा हेरौं वा सहरमा, गल्लीमा पुगौं वा बस्तीमा, मान्छेहरू चहलपहल कम छैन । किनमेल गर्न वा अत्यावश्यक कामका लागि मात्र होइन, मान्छेहरू घरबाहिर निस्केर टहल्न वा रमाइलो गर्न पनि भिडमा मिसिँदैछन् । न शारीरिक दुरी कायम गरिएको छ, न मास्कजस्ता सुरक्षात्मक विधि अपनाइएको छ ।
पछिल्लो समय काठमाडाै।सहित देशभर कुखुराको मासुको मूल्य बढ्दै गएको छ। बजारमा कुखुराको अ’भाव भएपछि मूल्य बढ्न थालेको हो। लकडाउनको सुरूवातमा कुखुराको मासुको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ८० रूपैयाँ थियो। अहिले ३ सय ९० देखि ४ सय रूपैयाँसम्म पुगेको छ।
उनकाअनुसार दुईसाता अघि कुखुराको मासुको मूल्य प्रतिकेजी ३ सय ६० थियो। बीचमा प्रतिकेजी ८० पुग्यो भने, शुक्रबारदेखि ३ सय ९० रूपैयाँ पुगेको छ। किसानले चल्ला हाल्न नसक्दा कुखुराको अ’भाव भई मूल्य बढेको उनी बताउँछन्।
‘लकडाउनको सुरूआतमा किसानले कुखुराको मूल्य पाएनन्, कसैको दाना, पानी खुवान नसकेर खोरमै चल्ला मरेपनि। लकडाउनले काम नगरी खाँदा पैसा सकिएर पनि किसानले चल्ला हाल्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले ज्युँदो कुखुरा अ’भाव भएको हो।’
अहिले ज्युँदो कुखुराको मूल्य प्रतिकेजी २ सय ७० पाएको काभ्रेस्थलीको कुखुरा पालक किसान राजन अधिकारीले बताए। उनकाअनुसार यो मूल्य अहिलेसम्मकै अधिक मूल्य हो। हप्ता १० दिनपछि विस्तारै कुखुराको मासुको मूल्य घ’ट्ने भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक हरिकृष्ण रावलले बताए।
Prevभुटानी राजा भन्छन ‘म नेपालको प्रसूति गृहमा जन्मेको हुँ नेपालीहरुसँग मेरो घनिष्ट सम्बन्ध छ’…
Nextयी नर्समा यस्तो छ र’हस्य जसका कारण अस्पतालनै भाइरल, पुरुष बि’रामीहरुको थेगी नसक्नु लाइन
कञ्चनपुरमा जन्मियो ४ आँखा २ टाउको भएको अदभुत बाच्छी